बुधबार यस्ता काम गर्नाले जिन्दगीभरी फल मिल्छ,ॐ लेखेर सेयर गर्नुहोस | सुदुरपश्चिम खबर
बुधबार यस्ता काम गर्नाले जिन्दगीभरी फल मिल्छ,ॐ लेखेर सेयर गर्नुहोस
Hindu woman performing routine pooja to the basil plant in the morning according to south Indian tradition. Basil plant is considered auspicious in Hinduism.
बुधबार बुध ग्रहको लागि समर्पित गरिन्छ। यस दिन गरिने केही कर्मले जिन्दगी भरी फल दिन्छ। बुधबार के गर्दा जिन्दगी समृद्ध हुन्छ, जान्नुहोस्ःबुधबार गणेश भगवानको पूजा गर्नु फलदायी मानिन्छ। मन्दिर वा घरैमा गणेश भगवान वा दुर्गालाई पूजा गर्दा छिट्टै शुभ खबर पाइनेछ।बुधबार मुंगको दाल दान गर्दा कष्ट निवारण हुन्छ।
जसको कुण्डलीमा बुध ग्रहको दोष छ खासगरी बुधबार गणेशलाई लड्डु चढाउनु फलदायी मानिन्छ।हिन्दु धर्ममा गाईलाई पूजनीय मानिन्छ। विशेषगरी बुधबार गाईलाई हरियो घाँस दिने व्यक्तिलाई सबै देवी(देवताको कृपा हुने गर्छ।बुधबार गणेश भगवानलाई सिन्दुर चढाउँदा मनले चिताएको पुग्ने विश्वास गरिन्छ।
यो पनि ःभनिन्छ एउटा सफल पुरुषको पछाडि एकजना असल नारीको भूमिका हुन्छ । हुनपनि असल नारी भएको घर नै स्वर्ग समान हुन्छ ।शास्त्रले पनि यहि बताउँदै आएको छ की असल नारी कुनैपनि घरको गहना हो । यहाँ हामीले नारीमा हुनुपर्ने केही गुणहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन गुण हुने नारीहरु भएको घर स्वर्ग समान हुन्छ ।– जुन नारी मीठो बचन बोछिन्, जुन नारीको आवाज मधुर छ र हरेक क्षण मायालु बोली÷ब्यवहार दर्शाउँछिन् भने त्यस्ता नारी भएको घर स्वर्गसमान हुन्छ ।– कुनैपनि घरमा आस्तिक, सेवा भाव राख्ने, क्षमतावना, दयावान र कर्तव्य पालना गर्ने नारी छिन् भने मान्नुस् त्यो घर स्वर्ग समान हुन्छ ।– जो स्त्री तनले भन्दा मनले सुन्दर छिन् त्यस्तो घर पनि सुन्दर बगैंचा जस्तै हुन्छ ।
– जो नारीले घरमा आएका पाहुनालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छीन् भने त्यो घरमा पनि देवताका बास हुन्छ ।– अर्काको दुखमा सहयोग गर्ने नारीले पनि आफ्नो घर उज्यालो बनाउन सक्छन् ।– जुन नारी हरेक दिन स्नान गरेर सफा एवं स्वच्छ वस्त्र लगाएर घरमा प्रवेश गर्छिन् भने त्यस्तो नारी भएको घर एकदमै आनन्ददायी हुन्छ ।– पतिव्रत धर्मको पालना गर्ने नारी भएको घरमा पनि कहिल्यै झग डा पर्दैन ।
ज्योतिष शास्त्रको आधारलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरूको स्वभाव र व्यक्तित्व साथै उनीहरूको भाग्य पनि फरक फरक बताइन्छ । फरक महिनामा जन्मने महिलाहरूमा उनिहरू बिचको प्रेम सम्बन्ध, वुद्दी, स्वभाव, मेहिनत परिश्रम जस्ता कुराहरू यसमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ज्योतिष शास्त्रलाई आधार मानेर तयार पारिएको मासिक आधारमा महिलाको भाग्य, कर्म र स्वभाव, गुणलाई तल व्याख्या गरिएको छ । हेर्नुहोस्
बैशाख महिनामा जन्मिने महिलाःयो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतयाः सुन्दर आँखा भएका हुन्छन् । उनीहरुको स्वभाव सरल र सहज हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । यिनीहरूबीचको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । यी महिलाहरू कम खर्च गर्ने तर धेरै क्रोध भएका हुन्छन् । उनीहरूले जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्ने बताइन्छ ।जेठ ःजेष्ठ महिनामा जन्म लिएका महिलाहरू उत्तम बुद्धि भएका हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सुख र धन सहजै प्राप्त गर्छन । यी महिलाहरूका लागि जीवनमा आइपर्ने कुनैपनि कार्यहरूमा समस्या हुँदैन् । यी महिलाहरू तिर्थधर्म गर्नेमा अगाडी हुन्छन् । यिनीहरुको जोडी सामान्य रहन्छ । त्यस्ता महिला उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुणी हुन्छन् ।
असार ःअसारमा जन्मिएका महिलाहरू मीठो बोली बोल्छन् । उनीहरूको आवाजमा मधुरता हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । कडा मेहनत र संघर्ष गर्दा समेत उनीहरूले सोचे जस्तो सुख र धन प्राप्त नहुन सक्छ । यी स्त्री दुब्ला पातला र झगडालु समेत हुन्छन् ।साउन ःसाउन महिनालाई पवित्र र शुभ महिना मानिन्छ । यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू राम्रो र धार्मिक काममा बढी मन लगाउँछन् । यस्ता स्त्री दान(पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा समान रुपमा सुख, दुःख, फाइदा र नोक्सान हुने देखिन्छ । यी महिलाहरूले सन्तानबाट सुख प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अधिकांस समय कुनै न कुनै बिमारीबाट घेरिरहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरू श्रीमान तथा प्रेमीबाट अधिक प्रेमको आशा राख्ने गर्दछन् ।
भदौ ःभदौ महिनामा जन्म लिएका महिलाहरू प्राय मिठो बोली र सरल स्वभावका हुन्छन । उनीहरूलाई श्रीमानबाट पनि अत्यन्तै सुख र प्रेम मिल्छ । घरपरिवार सासु ससुराबाट माया र सम्मान प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अलि जिद्दी स्वभावका पनि हुन्छन् । उनीहरूको जिद्दीका कारण धेरैपटक समस्याहरू आइपर्दछन ।असोज ःअसोज महिनामा जन्मिएका महिलाहरूको स्वभाव चञ्चल हुन्छ । उनीहरू कसैसँग कुरा गर्दा पनि सर्तकता अपनाउँछन् । यिनीहरुलाई प्रसस्त धन प्राप्त गर्नुका साथै श्रीमानबाट पनि सुख मिल्ने गर्छ । यिनीहरुलाई सन्तानबाट चिन्ता हुने देखिन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती मजाक गर्छन् । परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन् ।
कार्तिक ःकात्तिकमा जन्म लिने महिला धनवान र बुद्धिमानी हुन्छन् । उनीहरू धेरै कलामा निपुण हुन्छन् । यिनीहरु मिठो बोल्छन् । सामान्यतया यी महिलाहरूले आफ्ना श्रीमानलाई आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्छन् । घरपरिवार, सासु(ससुरासँग पनि झगडा गर्ने तथा झगडालु हुन्छन् । उनीहरूमा रुघाखोकी सम्बन्धी बिमारी बढी देखिन्छ ।मङ्सिर ःमङ्सिर महिनामा जन्म लिने महिलाहरू नरम स्वभावका हुन्छन् । यी महिलाहरू बिस्तारै कुरा गर्छन् । उनीहरूलाई झुटो कुरा गरेको मन पर्दैन । यिनीहरुको मन धार्मिक काममा बढी जान्छ । धन सञ्चित गर्ने र खर्च पनि अधिक गर्ने बानीले यिनीहरुको आर्थिक अवस्था सामान्य रहने गर्छ । उनीहरूलाई पेटसम्बन्धी समस्या बढी हुने सम्भावना रहन्छ ।
पुष ःपुष महिनामा जन्मेका महिलाहरूमा सामान्यतयाः अत्यन्तै क्रोध भरिएको हुन्छ । यी महिलाहरू आफ्नै कामबाट भाग्य निर्माण गर्ने खुबी राख्छन् । यी महिला कुनै एक क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छन् । सरस्वतीको विशेष कृपा हुने हुँदा यिनीहरु सुन्दर र शुसील पनि हुन्छन् । सबैसँग मिलजुल गर्ने स्वभावका कारण समाजमा मान सम्मान पाउँछन् । पुष महिनामा जन्मिने महिलाहरुमा टाउको दुख्ने, वायु र वाथ रोगको समस्या बढी देखिन्छ ।माघःमाघ महिनामा जन्मिएका महिलाहरू सुन्दर अनुहारका हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् । सरल र सहज स्वभावका भएपनि अलि जिद्दी स्वभाव का हुन्छन । यिनीहरू अरुलाई कुरा गर्दा पुरा कुरा गर्न नदिने स्वभावका हुन्छन् । यी महिलाहरू कमजोरीका कारण विभिन्न रोगको शिकार हुने पनि देखिन्छ ।
फागुन ःफागुन महिनामा जन्म लिने महिला धेरै दयावान हुन्छन् । उनीहरू कसैको पनि दुःख देख्न सक्तैनन् । उनीहरूको स्वभाव र विचार बढी धार्मिक हुन्छन् । यी महिलाहरू पढाइ लेखाइमा अत्यधिक तेज हुन्छन् । दयालु भएकै कारण धन धेरै आर्जन गर्न नसक्ने हुन्छन । स्त्री दुबली पातली हुन्छन् तर अग्ला । सामान्यतया यस्ता स्त्री कालो वर्णका हुन्छन । यस्ता महिला अरुका कुरा काट्ने पनि हुन् सक्छन् ।चैतःचैत महिनामा जन्मिएका महिला चलाख र चतुर हुन्छन् । यस्ता महिला सुन्दर हुन्छन् । यिनीहरु सुन्दर हुनुका साथै चञ्चल स्वभावका कारण अरुलाई छिटो आकर्षण गर्नेगर्छन् । धनबाट पनि उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । उनीहरूमा कहिलेकाहिँ क्रो ध हावी हुनाले सम स्या पनि निम्त्याउने गर्दछ । gnewsnepal.com
हिन्दु धर्म ॐ लाई म’हामन्त्र मानिन्छ । कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ । ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्,...